पोद्दारले पूर्व एआईजीहरुको नाम पोलेपछि क-कसलाई भयो छट्पटी ? | Citizen Post News
पोद्दारले पूर्व एआईजीहरुको नाम पोलेपछि क-कसलाई भयो छट्पटी ?
२०७५ असार ८ गते १४:५७
काठमाडौं । चर्चित ३३ केजी सुन तस्करी र सनम हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका विमल पोद्दारले आधा दर्जन पूर्व एआईजीहरुको नाम पोलेपछि उनीहरुलाई छटपटी सुरु भएको छ । सो प्रकरणको थप अनुसन्धान गर्न भन्दै गृहले गठन गरेको छानविन समितिको म्याद थपिएसँगै छानविन समितिले पोद्दार र अर्का ब्यापारी अकबर साहलाई पक्राउ गरेको हो ।
हुण्डी कारोबारी एवम् कालिकास्थानमा रहेको सन सिटी अपार्टमेन्टका लगानीकर्ता पोद्दारलाई विजुलीबजारबाट मंगलबार पक्राउ गरिएको थियो । विदेशी मुद्रा र सुन तस्करीमा समेत संलग्न पोद्दार ब्यवसायी दिपक मल्होत्राका ब्यवसायीक पार्टनर पनि हुन् ।
पोद्दारले विगतमा विदेशी मुद्रा र सुन तस्करी पूर्व एसएसपी रविराज श्रेष्ठसँग मिलेर गरेकै कारण उनले जागिरबाट हातमुख धुनु परेको थियो । उनको पूर्व एआईजीद्धय विजयलाल कायस्थ र विज्ञानराज शर्मासँग पनि सेटिङ रहेको थियो भने अर्कोतिर शर्माका भाई दया र पोद्दार विजनेश पार्टनर हुन् ।
पोद्दारलाई पक्राउ गरेको दुई दिनपछि अर्का व्यबसायी साहलाई छानविन समितिले पक्राउ गर्यो । सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका साह २०६६ माघ २४ गते काठमाडौंको लाजिम्पाटमा गोली हानी हत्या गरिएका सञ्चारउद्यमी जमिम साहका भतिजा हुन् । दुबईमा सक्रिय माफिया समूहसँगको सम्पर्कमा अकबरले नेपालमा सुन तस्करी गर्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको गृह स्रोतले बतायो ।
उता पोद्दार र अकबरको बयान शुरु भएसँगै नेपाल प्रहरीका पूर्व उच्चअधिकारी पनि तानिने भएका छन् । स्रोतका अनुसार पेद्दारले आधादर्जन एआईजीदेखि ठूला व्यापारीसम्मको सहयोगले आफूले सुन तस्करी काम गर्ने गरेका बयान दिएका छन् ।
उनले प्रहरीका पूर्व एआईजीहरु राजेन्द्रसिंह भण्डारी, बिज्ञानराज शर्मा, विजयलाल कायस्थ, रमेशसेखर बज्रचार्यलगायतको नाम पोलेको बताइएको छ । पोद्दार र अकबर पक्राउसँगै सुन तस्करी प्रकरणमा छानविन समिति 'ठूला माछा' नजिक पुगको चर्चा सुरु भएको छ ।